Indlela yokufunda kwi-Test, Exam, okanye Quiz
Ukufunda indlela yokufunda ukuvavanya yindlela eqinisekileyo yokuphucula amabakala akho. Ingaba uvavanyo lwakho oluzayo luza kusasa okanye kwiinyanga ezimbini, nokuba ngaba ngumthetho okanye imbuzo ekhethiweyo yokukhetha, nokuba unayo igumbi lokufunda okanye ucezu lwetafile ekhitshini, kukho iindlela ezininzi zokuphucula umgangatho wakho wokufunda nokuphucula amathuba akho okufunda. mpu melelo.
Ukuphucula amathuba akho kuloo vavanyo kunokuba lula njengoko ubeka indawo yakho yokusebenzela, okanye usebenzisa iindlela ezizamile kunye nezinyaniso zokufikelela kwisiqinisekiso esifanelekileyo njengoMTHETHO okanye i- Revised GRE .
Eli nqaku lisishwankathela ezinye zeengcebiso ezicwangcisekileyo zokufundisisa kunye neengcingo, ngoko unokwenza kakuhle. Hlola izixhumanisi ngakwesobunxele ukuze ufumene isitayela sakho sokufunda, yenza isithuba sokufunda esilisebenzelayo, kwaye wenze isicwangciso sithuba eside sigaba samabanga angcono.
Ukumisela isitayela sakho sokuFunda
Iingcali zezemfundo ziye zafumanisa into onokuyayazi: abantu bafunda ngeendlela ezahlukeneyo. Kukho iintlobo ezininzi zeengcaphephe- ezivela kumagama nezenzo zokubukela kwimidlalo kumbono womculo-kwaye ngenxa yoko, kukho neendlela ezininzi zokufunda onokuzisebenzisa ukuphucula izakhono zakho nokuphucula indlela yokufunda kunye nempumelelo yakho.
Ngaba ungumfundi othintekayo-ngaba ufunda ngokusemandleni ngokwenza? Isitayela esicacileyo sifanelekileyo kubafundi be- kinesthetic abafunda nokukhumbula ulwazi olungcono xa befumana imisebenzi.
Ukuba endaweni yoko, ungumfundi obonakalayo , ukhetha ukukhetha ulwazi ngokufunda incwadi yesifundo; kunye nabafundi abaphicothiweyo ngaba ngabantu abagcina ulwazi oluninzi xa beva okanye bengayifaka kumculo.
Akuqinisekanga na? Thatha imibuzo yethu yokufunda ifutshane ukuze ufumanise indawo enokuyilungelelanisa kwaye ulungelelanise imikhwa yakho
IimiSebenzi Ezinkulu zokuFunda kunye neZakhono
Akukaze kube mva ukufunda imikhuba emihle yokufunda , kwaye ukuba ufuna ukuphucula amabakala akho kunye nokusebenza kwesikolo, ungafuna ukuqala ngokufunda iindlela ezintsha zokuthatha amanqaku kunye nokwehliswa kwesithintelo. Ukwenza utshintsho olulungileyo kwimisebenzi yakho yasekhaya, izakhono zokufunda kunye nabalingani bokufunda banokukunceda ngokunjalo.
Ngaba ufuna ezinye iingcebiso ezifanelwe abafundi besikolo esiphakathi? Abafundi abaqala ngokukhawuleza ukuba baqulunqe kwaye basebenzise isicwangciso sokuphucula imikhuba yokufunda banokubeka isiseko esiqinileyo sempumelelo yexesha elizayo. Yilahle i-highlighter kunye neminye imikhwa emibi kwaye uza kubona izinto ziphucula.
Ukubeka Indawo Yakho Yokufunda
Abafundi bafunda ngokungafaniyo, kwaye yintoni eyenza umhlobo wakho okanye udade wakho ongcono kunako ukukusebenzela. Ngaba unobungozi kwingxolo okanye unamandla kwaye ugxile kumculo wesiqalo? Ngaba ufanele uthathe ikhefu okanye usebenza kakuhle ukuhlala ngokuthula ngeeyure ngexesha? Ngaba ufundela ngcono kwiqela okanye wena? Leyo neminye imiba inokukunceda ukuba wenze indawo yokufunda esebenzela wena.
Akuyena wonke umntu onendawo yokufundela ukuba angayibeka eceleni kunye nebango lakhe. Ngoko, siye saqokelela ezinye iingcebiso zokukunceda ufumane indawo yokusebenza kwikota elincinci.
Indlela yokufunda ngeeNdidi ezahlukeneyo zovavanyo
Akukho mntu watsho ukuba ukufundisisa ukuvavanya kwakumnandi, ngakumbi xa kukho ezinye izinto ezininzi ezenza umdla wakho kwisikolo. Kodwa, xa kuhla kuwo, ukwazi ukuba ufunde ntoni ngohlobo lovavanyo olunokukunceda ukuba ufikelele kumabanga, velisa abazali bakho, kwaye ekugqibeleni, kukufumene i-GPA efanelekileyo.
Ukuncedisa, siye saqokelela iindlela ezinokuzilungiselela ukulungiselela iimvavanyo ezikhethiweyo ezininzi okanye imiyalezo yegama . Kukho ezinye iingcebiso kulabo abajongene neklasi yekota kunye neemviwo zokugqibela .
Ukufunda kwiimvavanyo eziQiniselelweyo
Ukuba uceba ukuqala iikholeji kunyaka ozayo okanye kunjalo, unokuba ucinga ukuba uthathe i-SAT kunye noMTHETHO : nokuba uyakwenza okanye akunjalo kuxhomekeke kwimeko yakho.
Xa usugqibile, kukho iindlela ezahlukeneyo ezifanelwe wena, nokuba uthatha i- SAT okanye UMTHETHO . Ukuba ugqiba isifundo sakho segraduate kwaye uhambela kwisikolo esikolweni, uya kufuneka ulungiselele iGRE. Kwaye ukuba umgangatho wezomthetho kwixesha lakho elizayo, lungela i-LSAT.
Ukuziphendukela Kwezenhlalakahle-Ngaba I-Modern Society yavelisa njani?
I-MLB Pennant Race Collapses
Ukufumana iiRots Square, iCube Roots, kunye neNth Roots kwi-Excel
Namhlanje ndafunda kwiNzululwazi (TIL)